Usawoti Ungaba Mori Isikhala Esihle, Imvelo Ethambile Yongxowankulu | JABULA
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Usawoti Ungaba Mori Isikhala Esihle, Imvelo Ethambile Yongxowankulu | JABULA
2020 / 10 / 17 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 4545 0
Siphuze ikhofi saxoxa
Ukuxhumana kusenza sisondelane
Impelasonto yayinde futhi ijabulisa
Izinsuku ezinhle zizonanela
Esikhathini se-post-bhubhane, impilo ibuyela kancane kancane kokujwayelekile, futhi abantu baqala ukucabanga kabusha futhi bahlole kabusha izimpilo zabo ngokuzayo.
Ngesikhathi salo bhubhane, abantu bazizwa bengenakuphumula futhi bengakhathazeki ngomqondo owodwa wokuhlala endaweni elinganiselwe isikhathi eside. Ngenxa yalokhu, i-ENJOYDESIGN ihlolisise uchungechunge lwezimo ngekusasa, ngethemba lokwakha indawo yokuhlala ebumbene yobuhle eyoletha ukuphumula, inkululeko nethemba ngekusasa, futhi iveze isifiso sokuphila esikhathini esizayo.
Indlu yezimbali, ikhofi, okuhle, izincwadi, lezi zimpawu zokuthula nokunethezeka ziguqulwa zibe yizinto ezibonakalayo lapha, ezixhumanisa impilo enhle ndawonye, ​​zandisa indawo yokuhlala nomphakathi ophilayo ohlangene, futhi futhi zibone ukuxhumana ngokomzwelo phakathi komkhiqizo nabathengi.
Indlu Yezimbali Zasehlathini
Bloom ngokuma okugcwele
Ukushayela phakathi kwezibani ezintantayo nezithunzi
Umqondo wobuciko we-static braking
Yenza lo mzuzu ube muhle
Ukuhamba esikhaleni, izimbali ziqhakaza ngendlela egcwele futhi enamandla, futhi umoya ugcwala iphunga elimnandi lezimbali, eligeleza ngentelezi ethule nenhle. Ukubeka phansi ukuxokozela okuncane, abantu sebezoqala uhambo lokuhlola ikusasa lempilo.
Umoya ohelezayo, uzwa iphunga lokukhanya nenhle, nobungqabavu besikhala esikhaleni, ngaso leso sikhathi kusebenze ukusondelana phakathi komakhelwane, kucishe kuvale ibanga phakathi kwabantu.
Eduze kwendawo yombukiso womgwaqo, silungiselele indawo ethokomele izilwane ezizodlalela kuyo inhliziyo yazo. Ingilazi ebonakalayo ingafiphaza imingcele yesikhala, yenze ubudlelwano phakathi kwabantu nezilwane busondele, futhi intshisekelo yemvelo ithinte izinhliziyo zabantu, lapho ubuhle obumsulwa bokuhamba buchichima.
Iphunga liyikhodi eyimfihlo yombuthano,
Izimbali, ikhofi nezincwadi
Umuzwa wephunga unesandla esiphakeme
Futhi uthole umzuzu wokuphumula kakhulu
Empilweni yedolobha elihlanya, abantu babheke phambili ukubuyela esimweni sabo sangempela, bafune indawo yokubuyela kuyo, futhi balinde ingxoxo efudumele nenobungane. Endaweni yebha yekhofi egeleza uhlaza olusha, siyehlisa ijubane lethu, sikhohlwe iziphazamiso eziningi zedolobha, bese sizitika ntambama ngekhofi elimnandi, ukuxoxisana nabanye nokuthola ukuzwelana ngokomzwelo.
Inani elifanele nje lohlaza lihlobisa umngcele webha yekhofi. Ngaso sonke isikhathi ukuvusa izinkumbulo zemvelo kimi nawe. Ukulalela umculo ngama-headphone amakhulu kuyindlela ejwayelekile yansuku zonke kanogwaja wokuqala othandekayo, uBean Bean. Ukubukeka kwaso kwenza isikhala sithakazelise futhi sibe namandla. Uvela ezindaweni ezahlukene esikhaleni esihlanganisiwe futhi uhamba nawe buthule futhi ufudumele.
Khohlwa konke, futhi konke kuzokuphelezela. I-symbiosis yomphakathi oyinhlanganisela kanye ne-aesthetics ephilayo ivumela abantu abodwa noma abendawonye ukuthi babe nokuhlangenwe nakho kobuhle nokunethezeka.
Kunomsindo ngaphandle futhi kuthule ngaphakathi
Sizizwa sikhululekile ngalesi sikhathi
Udonga lwengilazi lwengilazi olusobala lufiphaza imingcele yesikhala, luxhumanisa izigcawu zangaphakathi nezangaphandle. Ukukhanya kwelanga kuyangena, kushiye izithunzi zihamba. Ukuthwebula izikhathi ezinhle ekuxakekeni nasekuthuleni, ubulula bemvelo kungukuphola okujabulisayo komphefumulo.
Sifuna izinkumbulo ezivela ezintabeni nasemasimini, ubuhle balokho kubalula okukhethekile nobumsulwa. Sizungezwe uhlaza, siyazicwilisa kule ndawo enokuthula nenamandla, lapho ubuhle bemvelo bugcwalisa izimpilo zethu ngethemba.
Izitebhisi namashelufu ezincwadi, anemigqa yokuqhubeka nokukhula kwemvelo kokuhleleka kwesiko, indawo yokuzilibazisa ekukhanyeni nasethunzini iyashintsha kancane, isigqi esibonakala singekho sidonsela ukucabanga kwabantu okungenamkhawulo, kumbala wokhuni ukudonsa amandla wokuthula.
Ukhuphuka izitebhisi, uhlaza oluchumayo luhlehla ngemuva kwakho, kanye ne-sandbox nezindawo zokuxoxisana, amapuleti asebenzayo athule avele kancane phambi kwakho.
Amakhasimende anentshisekelo kuphrojekthi angathola imininingwane ayifunayo lapha; izingane ezinesithukuthezi ngezingxoxo zabantu abadala zingacasha endaweni yezingane ekhethekile; nabangane abangenanjongo bangaqhubeka nokuhlola isikhala esabiwe. Konke kumayelana nokuhlukahluka nokufakwa, futhi yilokho i-United Living Experience Center enikeza khona izivakashi.
Isibani Sokugcina Sokudla
Abanye abangane bayahlangana futhi bahlebe
Nambitha amahlumela ezindebeni nasemazinyweni
Jabulela impilo ngalesi sikhathi
Okwamanje lapho ungena endaweni yokudlela, uzozizwa sengathi usemfihlakalweni yeWizard of Oz. Umkhathi ophuphayo futhi ongaqondakali, ophakanyiswe ngumcabango wakho, ugcina ubuhle bawo obuhle futhi wenza isikhala sigcwale umlingo omangalisayo, okwenza inhliziyo yakho ivuthe.
Ukuhlanganiswa kwamalambu we-dusky, izingqimba zesikwele kanye nxazonke, izinto zodonga ezinokhahlo, ukukhanya, amafomu nezinto zokwakha kudala indawo yokudlela e-rustic neyesiko, yasendulo, elula nenhle, eletha isipiliyoni sesikhala sokugcina, ukuvusa izinkumbulo kuso sonke isikhathi nendawo, futhi ukubona ukuxhumana ngokomzwelo phakathi komkhiqizo nabathengi.
Ikhwalithi nokugcina imfihlo, imizwa enamandla futhi enamandla ifakiwe, iyashintshaniswa futhi ishayisane nesikhala, ngohlobo lobukhulu obudonswa yisikhathi, lapho izivakashi zicwiliswa khona, zivulwa ngendaba futhi zizwe ubuhle bothando.
Abahleki benjabulo nenjabulo
Ukunyakaza okuhlekisayo nehaba
Konke kumnandi ebuntwaneni
Izinsuku zobuntwana, zilula futhi zimsulwa
Indawo yezingane isebenzisa umqondo "wokumemeza nokulalela" ukuxoxa indaba yesikhala. Umbala wewolintshi omusha udala isimo esijabulisayo nesinempilo, kuyilapho ubujamo obugobile bugqamisa ukungezwani kwezinto, okwenza umhlaba ube mnandi ezinganeni. Idizayini isebenzisa amabhlogo ombala namajamo ukudala izigcawu ezimangazayo futhi inikeze isikhala amandla ashukumisayo.
Kusukela esikhathini esedlule kuya esikhathini esizayo, isikhala akumele sibe isibopho noma iketango, kepha kufanele sithwale futhi siqhubeke nempilo engcono. Njengokukhula kwemvelo, samukela impilo entsha ngokulangazelela nethemba. Lokhu kungukuhlola komphakathi wakusasa, ukuthatha ikhaya njengendawo enwetshiwe, evumela imvelo ukuthi ihambisane nempilo, idale izigcawu zokuhlala ezifudumele, futhi ithole ukuzwelana ngokomzwelo kokuhlangenwe nakho okugcwele ubumnandi.
Lapha, imingcele phakathi kwemvelo nedolobha ifiphalisiwe, umbono wesipiliyoni sempilo uzophinde uchazwe, futhi ukuqonda kanye nemizwelo kuhlangane, umuzwa ojulile futhi ogcwele ozokwenza abantu bakhohlwe ukubuya. Umphakathi ophilayo onemfudumalo nokuxhumana, uzitika esikhaleni sezinkondlo, unikeza ukudlala okugcwele emcabangweni omuhle wesikhathi esizayo phakathi kokuhleka, ukufudumala nokungabi msulwa.
Igama lephrojekthi: UVanke - iGolden Mile International
Ikheli Lephrojekthi: IGuangdong Jiangmen
Indawo Yephrojekthi: I-1193m²
Inkampani Yokwakha: JABULA
Ububanzi Bokuqamba: Ingaphakathi Nesoft Design
ENJOYDESIGN yasungulwa ngo-2010 futhi itholakala e-Guangzhou. Njengenkampani yobungcweti yokwakha ingaphakathi, sihlinzeka ngokuhlelwa kwemikhiqizo nokwakhiwa okwenziwe ngokwezifiso kwezindawo zokuhlala (amahhovisi okuthengisa, amafulethi wokubonisa, izindlu zokuhlala, izindawo zomphakathi) namaphrojekthi wehhovisi amaklayenti aphezulu ezimbonini ezahlukahlukene, kanye nokuqedelwa kokuklanywa kwe-R & D ejwayelekile amaklayenti wezezakhiwo, futhi sinikeza ngobungcweti kanye nezinsizakalo zokubonisana zemfundo, amaphrojekthi amadala wokuvuselela nokuvuselela.
Sineqembu lokuklama lobuchwepheshe labantu abangaphezu kuka-260. Njengodokotela wobuhle, sikhuthaza ukuthi ubuhle bubuyise impilo koqobo, futhi siphikelela ekuqaliseni imizwa nekhono lekhasimende, futhi sinikeza amakhasimende amaningi umklamo wesikhala wanamuhla omangalisayo nolusha ngolimi lwethu oluhlukile lokuklama. Sikholwa ukuthi konke ukwakheka kuqala kusukela lapho kuguqulwa khona, noma kungukusebenzela umphakathi noma ukushintsha izimpilo zabantu, noma ngabe ushintsho lufihlekile.
Siyi-maverick, kepha asihlukile; sipholile, kodwa sinobungane.
Edlule :: I-Senior Grey, i-Avocado Green ne-Champagne Pink, Isikhala Sothando Lapho i-Retro And Coexist Yesimanje Olandelayo: Ukuhlaziywa Okusezingeni Eliphakeme Futhi Eliphelele On Luxury Light!
LA PICADA | I-Hummingbird Design New Works
2020 / 12 / 12 2659
Imiklamo Yezakhiwo Zokulala Ezintsha ze-2020 | Izitayela ezingama-80
2020 / 12 / 05 3025
Isitayela Se-Log, Ungabuqamba Kanjani Ubuhle Bomculo?
2020 / 11 / 29 2869
Ukwenza Izinto Zibe Lula Emadolobheni, Ubuhle Bensimu Yemibala Emnyama, Emhlophe, Nempunga - D ...
2020 / 11 / 29 3705
Okumpunga, Kungani Kuthuthukile?
2020 / 11 / 29 3425
Inhle futhi Inothando, Ihlangana Nemvelo - Amanzi Asezintabeni ...
2020 / 11 / 29 3288